देशभक्ति - Lekhapadhi प्रेरक प्रसंग : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १९:५५ मा प्रकाशित
तंत्र फेरियो मन्त्र फेरिएन
हाकिम फेरियो हैकम फेरिएन
धारा फेरियो धारणा फेरिएन
सामन्त फेरियो सामन्तवाद फेरिएन
राजनीतिज्ञको राष्ट्र र जनता प्रति उत्तरदायी
लेलिनको नेतृत्वमा रुसमा महान् साम्यवादी अक्टुबर क्रान्ति सम्पन्न भइसेको थियो । क्रान्तिपछि कमरेड लेलिन रुसका स्वतन्त्र शासक बने । तर विशाल रूसका शासक बनिसक्दा पनि कमरेड लेलिनले आफ्नो संघर्षका दिनलाई विर्सेका थियनन् । उनी राष्ट्रपति भइसक्दा पनि हरहमेशा पहिले झै साधारण मैलो कोट, ठूलो हवाई लो पतलुन् लगाएर हिँड्थिए । उनलाई उनको धेरै मित्रले सम्झाउँथिए तर उनी मित्रजनका सल्लाह सुझाव लाई मुस्कुराउँदै त्यसै टारिदिन्थे । एक दिन उनका एक मित्रलाई लेलिनको साधारण घर र व्यवहार देखेर सारै खिन्न भयो । त्यस माथि दिनमा २० घण्टा काममा जोतिने र चियामा चिनिसमेत नहाली पिउने लेलिनको बानी सहन नसकेर ती मित्रले उनलाई भने – “कमरेड , आजको स्थितिमा तपाईंलाई साधारण पहिरन एवम् साधारण घर सुहाउँदैन । त्यसमाथि तपाईंको खानासमेत अति साधारण छ, आखिर यस्तो किन?”
सोच्नु चाहनुहुन्छ भने ती मानिसको बारेमा सोच्नुहोस् , जसको यति पनि छैन, अब तपाईं आफैं भन्नु होस् म आफ्ना दाजु भाई तथा दिदी बहिनी लाई भोकै नागै राखी कसरी मिठो खाना र राम्रो लाउन सक्छु ?
लेनीनले मित्रको कुरा लाई राम्ररी सुने र मुस्कुराउँदै भने – कमरेड, म त भाग्यमनी छु । आखिर मसँग बस्नका लागि घर त छ । ती मानिसको कस्तो हालत होला जसको सानो छाप्रोसमेत छैन । मसँग लाउन कोट त छ र चिनी नभए पनि चिया त छ । सोच्नु चाहनुहुन्छ भने ती मानिसको बारेमा सोच्नुहोस् , जसको यति पनि छैन, अब तपाईं आफैं भन्नु होस् म आफ्ना दाजु भाई तथा दिदी बहिनी लाई भोकै नागै राखी कसरी मिठो खाना र राम्रो लाउन सक्छु ? मेरो के औकात छ? हामीले यि यस्ता असमानता हटाउन यतिका वर्ष संघर्ष गर्यौ । मैले पनि यस्तो असमान व्यवहार गरे भने त्यस संघर्षको के मूल्य रहयो र ? ती विर योद्धाको नजरमा मेरो के इज्जत होला ? त्यसैले हामी समानता विश्वास गर्छौं । हामी कम्युनिष्ट बन्ने प्रयत्नमा छौ र समाजबाद हाम्रो लक्ष हो।
यी एक महान् क्रान्तिकारी थिए र हाम्रो देशमा क्रान्ति गरी आफूलाई महान् क्रान्तिकारी बन्न खोजेका महान् व्यक्ति हरु आज महल मा बसेर शिग्रेटको धुवा उडाउदै सोमरसको चुस्की लगाउँदै जनताका समस्यालाई कुल्ची आफ्नो एइस आराममा बसेका छन् ।
जस कारण आज देश दुर्गति तिर दगुर्दै समाजवाद मा कालोधब्बा लगाई दिएका छन् ।
जनताको राष्ट्र भक्ति
रूस र जापानको बीचमा घमसान यूद्ध चलिरहेको थियो ।
एउटा किल्लामा रूसी सेनाले अधिकार जमाइसकेको थियो । यो किल्लाको चारैतिर गाहिरो खाल्डो थियो । अधिकार जमाइसकेपछि रूसी सैनिकले खाल्डोमथिको पूल भत्काइदिएका थिए । जापानी सैनिकहरू आफू कहाँ आइपुग्न नसकुन् र किल्लामा आफ्नो अधिकार रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको थियो ।
जापानी सैनिकहरूलाई भने खाल्डो कसरी पार गर्ने एउटा विकट समस्या थियो। युद्धमा त्यो किल्लाको धेरै महत्त्व थियो । जापानी सेना नायकसँग तत्काल पुल बनाउनका लागि पर्याप्त सामान र समय थिएन
जापानी सेनानायक चिन्तित थिए उनले केही सोच्न सकिरहेका थिएनन् । उपायबारे धेरै साेचविचार गरेपछि उनले आफ्ना सैनिकहरूलाई भने – साथीहरु हो, यो खाडल पार गर्नु हाम्रो लागि धेरै आवश्यक छ । नत्र किल्ला हातमा आउन सक्दैन । खाल्डोमा तत्कालै पुल बनाउन पनि सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा यो खाल्डो सिपाहीको शरीरले भर्न सिवाए कुनै उपाय छैन । आफ्नो मातृभूमिको लागि जो जो सैनिक आफ्नो बलिदान खुसी खुसी दिन चाहन्छन्, उनीहरू अगाडि आओ । यो संकटको घडी हो ।”
सेनानायकको आह्वान सुनेर सबै सेना अगाडि बढे । एउटा पनि सैनिक यस्तो थिएन , जो आफ्नो मातृभूमिको लागि प्राण दिनमा पछाडि हट्न चाहोस् । सेनानायक ले सबै लाई आज्ञा दिए – आ-आफ्नो लुगा खोल र हतियार एउटा किनारमा राखेर खाल्डोमा हामाफाल्न सुरु गर ।
आफ्नो लागि होइन आफ्नाे देशको लागि मर्ने व्यक्ति महान कहलिन्छ।
सेनानायकको आदेश सुने बितिक्कै जापानी सैनिक एक एक गरेर खाल्डोमा हाम फाल्न थाले। केही क्षणमै त्यो खाल्डो उनीहरू को शरीरले भरियो । आफ्ना सैनिकको यो बलिदानी देखेर सेनानायकको आँखा रसायो । उनीहरूको बनेको पुलबाट अरु सैनिकले पुल पार गरे । उता रूसी सैनिक जितको खुसीमा नाचिरहेका थिए । पुलको अभावमा जापानी सेना आफ्नो किल्ला भित्र आउन पाउँदैन भन्ने लागि रहेको थियो तर आफ्नो देश को लागि जे पनि गर्न सक्ने बहादुर जापानी सेनालाई त्यो खाल्डोले रोक्न सकेन । आफ्नो लागि होइन आफ्नाे देशको लागि मर्ने व्यक्ति महान कहलिन्छ।
यी दुवै उदहारण हेरौ यहाँ एउटामा राजनीतिज्ञको वफादार राष्ट्र र जनता प्रति उत्तरदायी रहेको छन् भने दोस्रोमा जनता देश प्रति वफादार । कुनै पनि देशमा जनता र सञ्चालक दुवै आफ्नो कर्तव्य प्रति इमानदार लगनशिल हुन्छ्न भने देश बन्न कुनै समय लाग्दैन र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आयको सार्थक हुन्छ त्यसैले अब आत्मक्रान्तिको आवश्यक रहेको नेपाली राजनीतिज्ञले लेनिनको राष्ट्रभक्त अनुसरण गर्नु पर्छ भने नेपाली जनताले जापानी जनताको देश प्रेम अनुसरण गर्नु पर्छ ।